TCB ( ရှေးတရုတ်တို့ဝါဒ-အကြမ်းမျဉ်း ) | ZAYYA
← What’s “the Revolution”?
စင်စစ် အမျိုးအမည် မတူညီသော ဘာသာတို့ကို ပေါင်းစပ်ရန်မှာ မလွယ်ကူပေ။ ဘာသာတစ်ခုမှ ကွဲပြားသွားဖို့ရာသာ လွယ်ကူသည်။ သို့သော် တရုတ်တို့ ၏ ဘာသာကြီး သုံးခု ဖြစ်သော တာအိုဝါဒ၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒတို့သည် တခုနှင့် တစ်ခု ကူးလူးယှက်နွယ်နေကြသည်။ အနီးစပ်ဆုံးမှာ တာအိုဝါဒနှင့် ကွန်ဖြူးရှပ် ဝါဒတို့ ဖြစ်ပြီး ခေတ်စကား နှင့် ဆိုလျှင် Shamanism ဟု အမည်တပ်ကြသည်။ Shamanism သည် သဘာဝကို ပဓာနပြုသော ဝါဒ ဖြစ်သည်။ သဘာဝ တရားကိုသာ လေ့လာ၍ သဘာဝ အတိုင်း ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းကို ( အကြမ်းနည်းအားဖြင့် ) အသားပေးသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ် ဘာသာ အယူဝါဒ အမျိုးမျိုး ရှိကြသည့် အနက် လူတစ်ယောက်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်၊ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်၍ မရပေ။ သို့သော် အရှေ့တိုင်းသား ( ဥပမာ – ဂျပန်တွင် ) လူတစ်ယောက်သည် တစ်ချိန်တည်း၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ရှင်တို ဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တိဘက်တွင်လည်း အကြင်လူတစ်ယောက်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လည်း ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့ ဘျွန်ပိုဘာသာဝင် တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်၍ အနောက်တိုင်းတွင်လည်း မရှိဟု မဆိုလို။ ဥပမာ အမေရိက မြောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော သူတစ်ယောက်သည် ရိုးရာ- နေအက ကို မစွန့်လွှတ်သော ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်သေးသည်။
စကားစ ပြန်ဆက်ပါမည်။ ဖူရှီ အစဉ်အလာတွင် တစ်ကြောင်းတည်း ဖြစ်ထွန်းလာပါလျက်နှင့် တာအိုဝါဒနှင့် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ ဟူ၍ အဘယ်ကြောင့် နှစ်မျိုးနှစ်စား ကွဲပြားသွားရသနည်း ဟု မေးရန်ရှိပါသည်။ ယင်းအဖြေကို ကွန်ဖြူးရှပ်ကပင် ပြန်ဖြေပေးထားသည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်နှင့် လောက်ဇူတို့ ပညာရှိ နှစ်ဦး ဆုံကြသောအခါ ကွန်ဖြူးရှပ်က ဤသို့ ပြောခဲ့သည်။
“ကျွန်ုပ်၏ လှေကားထက်မှ အမြင့်ဆုံးသော အပိုင်းသည် အသင့်လှေကား၏ အနိမ့်ဆုံးသော အပိုင်းသာ ဖြစ်သည်”
တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒသည် ဗဟိဒ္ဓလောကကို ပုံဖော်၍ တာအိုဝါဒသည် အဇ္ဈတ္တလောကကို ပုံဖော်သည်။
ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒသည် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့၊ ထုံးတမ်း၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ၊ စောင့်ထိန်းမှု၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ ရိုသေမှု၊ အစိုးရကောင်း ( မိမိကိုယ်ကိုယ် အစိုးရခြင်း၊ မြို့ရွာကို အစိုးရခြင်း၊ နိုင်ငံကို အစိုးရခြင်း စသည် ) တို့ကို ပုံဖော်လမ်းညွှန်သည်။ တာအိုဝါဒသည် အဇ္ဈတ္တအတွင်း၏ ကြည်လင်မှု၊ ရှင်းသန့်မှု၊ ရိုးရှင်းမှု၊ အေးချမ်းမှုကို လမ်းညွှန်သည်။
ထိုဝါဒနှစ်ခုကြားတွင် ဗုဒ္ဓဝါဒ ရောက်ရှိလာသောအခါ အေးငြိမ်းရာနှင့် မေတ္တာတရားကို ပဓာနပြုသည်ဟု ယုံကြည်သော ဘာသာတရားတစ်ခု အဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ အဝှမ်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည် ဆိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် နိဗ္ဗာန ( ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်ငြိမ်းရာ ) ကို ညွှန်သော ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများ ( စိန္တာမယ အားဖြင့် သိရှိသော ) “၁။ ဒုက္ခသည် ရှိ၏။ ၂။ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားသည် ရှိ၏။ ၃။ ဒုက္ခမှလွတ်ကြောင်း လမ်းသည် ရှိ၏။ ၄။ဒုက္ခမှ လွတ်ရာငြိမ်းရာသည် ရှိ၏” ဟူသော သစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲ စဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Taoism = တာအိုဝါဒဟု ငယ်စဉ်က အစိုးရထုတ် ဖတ်စာများတွင် ရေးသားသည်ကို မှတ်မိပါသည်။ ဆရာ သက်လုံကဲ့သို့ မြန်မာစာရေးဆရာများ နှင့် အခြား အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်စာအုပ်အများတွင် “တောက်” အင်္ဂလိပ်အသံထွက် – Dao ဟု ဆိုသည်။ တာအိုဝါဒ၏ မူရင်းကျမ်းသည် ကမ္ဘာ့ဒဿနိက စာပေနယ်တွင် အသေးငယ်ဆုံးနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုမှု အများဆုံး ကျမ်းစာအုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ Tao Teh Ching ဟု အမည်ရှိပြီး အကြမ်းအားဖြင့် “တာအို၊နှင့် ကျင့်စဉ်တော်ကျမ်း” ဟု နားလည်နိုင်ပါမည်။
Confucius = ကွန်ဖြူးရှပ်ဟုသာ အလွယ်ခေါ်ပါသည်။ ကွန်ဖူဇူ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအသံထွက် “ဇူ” မှာ ဇူ နှင့် ဇီ ကြား အသံ ထွက်ကြောင်း မှတ်သားရဖူးသည်။
Lao Tzu = အချို့က လာအိုဇူ ဟု ဆိုကြသည်။ Tao ကို တာအိုဟု ထွက်သကဲ့သို့ Lao ကို လာအိုဟု ထွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အသံထွက်လေ့ရှိသည်က လောက်ဇူ သာ ဖြစ်သည်။ Lao Tzu သည် အမည်ရင်းမဟုတ်။ ၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဒဿနဆရာကြီး၊ အဘိုးကြီး၊ ပညာရှိကြီး ဟုသာ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ကြောင်း ဘာသာပြန်ကျမ်း တော်တော်များများတွင် ပြဆိုထားသည်။
Lao Tzu နှင့် တာအိုဝါဒ အကြောင်းအရာကို ဤသို့ အကျဉ်းမျှဖြင့် မည်သို့မှ မပြည့်စုံနိုင်ပါကြောင်း။
Tagged with ancient, behaviour, buddhism, china, Christian, confucius, Fu Shi, Hinduism, India, japan, LaoTzu, life, nobel, religion, Shitoist, Tao, truth, way	About zayyaJust Be. That's Enough!
TwitterError: Twitter did not respond. Please waitafew minutes and refresh this page.Top Posts	ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကြောင်စီစီနိုင်ရခြင်း အကြောင်း	ပလုံ	ကိုယ်ပိုင် မျက်နှာ	အလွဲ	ငါသည် ငြိမ်သက်စွာ စောင့်ဆိုင်းလျက်	ဆိတ်ငြိမ်မှု (တစ်ခုတည်းသော ဘာသာစကား)	စောရ နှင့် နာဂါဇုန	Tagsanswer
Visitors	free web counter Top ClicksNoneBlog Stats	57,775 hits